June 12, 2021 - Khitalin Media
လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲမှာ သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိတဲ့ အဘိုးဦးအောင်အကြောင်း
လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲမှာ သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိတဲ့ အဘိုးဦးအောင်အကြောင်း ဒီနေ့ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲမှာ အဘိုးဦးအောင် သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ပါပါတယ် ကုန်းဘောင်ပထမံနဝင်းဦးအောင်🙏🙏🙏 အဖိုးကိုကျမတို့ကျိုက်တလန်းအရန်စေတီထီးတော်တင်တဲ့နေ့(၂၂.၅.၂၀၂၁)မှာတောထဲကအိမ်တအိမ်မှာစဖူးတွေ့ရတာပါ🙏 ပါဠိဆရာတော်ရယ်သဲဖြူမဟာမြိုင်ဆရာတော်ရယ်ကျမတို့မိသားစုကလွဲပြီးဘယ်သူမှမလာရဘူးဆိုလို့ကျန်တဲ့သူတွေနေခဲ့ရပါတယ်… ကျမလဲအဖိုးကိုဘယ်သူမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး သဲဖြူဆရာတော်ကိုတွေ့တော့အဲ့ဒါငါ့သားငါ့သားအစစ်လို့မိန့်ပါတယ် သဲဖြူဆရာတော်ကလဲပြုံးနေပါတယ် သဲဖြူဆရာတော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖိုးနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပြပါတယ် ပါဠိဆရာတော်ရဲ့လက်ကိုမလတ်တမ်းကိုင်ထားတာပါ… ဆရာတော်တွေနဲ့ဆိုတော့ကျမဘာမှမလျှောက်ရတော့ကျမညနေတခေါက်သွားတော့အဖိုးကသိပြီးတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ် သမီးကအဖိုးနဲ့ပဌာန်းဆက်နီးလို့တနေ့ထဲနဲ့နှစ်ခါတွေ့ရတာအဖိုးကလူတယောက်မအတွေ့မခံတော့ဘူး တနေ့ထဲနဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့တာငါ့သမီးဘဲရှိတယ်လို့မိန့်ပါတယ်…. အဖိုးကဘုရားဆုပန်ပါ သူဘုရားဖြစ်ရင်တွေ့ပါစေဆုမတောင်းနဲ့တဲ့ဘဝတိုတိုနဲ့ဖြတ်ပါတဲ့ဘုရားတွေအကြောင်းတရားဟောတာနှစ်နာရီနီးပါးရှိပါတယ်🙏🙏🙏 နောက်တကြိမ်ကျမအမေကျမသားကြီးနဲ့အဖိုးစီရောက်ပါတယ် အဖိုးကကျမကိုမိန့်ပါတယ်သမီးသဲဖြူဆရာတော်နဲ့နေပြည်တော်ကပါဠိဆရာတော်သိလားတဲ့သိတယ်အဖိုးဟိုနေ့ကပါတယ်လေလို့ပြောတော့ အေး အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးကိုသေသေချာချာကိုးကွယ်သီလ၊သမာဓိအားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတယ်လို့မိန့်ပါတယ်🙏 ကျမကိုအဖိုးကသမီးကိုဒါနအကြောင်းဟောမယ်သေစေချာချာနာနော်တဲ့ သမီးကဒါနအားကြီးလို့ဟောတာလို့ပြောတော့ကျမကအဖိုးကျမကသူများတွေလိုကြီးကြီးမားမားလှူထားတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ သမီးအကြီးကြီးလှူမှမဟုတ်ဘူးသမီးကဒါနအားကောင်းတယ်ဒါနပါရမီမပြည့်ရင်ကျွတ်တမ်းဝင်ဖို့မလွယ်ကြောင်းပြောပြီးဒါနလေးမျိုးဟောပါတယ်🙏 အဖိုးကိုတချို့ကအသက်နှစ်ရာကျော်ပြီကုန်းဘောင်ခေတ်ကအဘဘိုးဘိုးအောင်ကယ်သွားတဲ့စင်္ကြာမင်းလေးလို့လဲပြောပါတယ်… အဖိုးကကျမကိုပြောတာတော့သူကမြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၂၀၁)ခုနှစ်မှာမွေးတယ်လို့ပြောပါတယ်… ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီကငါ့ထက်ဒါနအားကြီးတယ် ငါကစရဏမှာသူ့ထက်အားကြီးတယ်လို့မိန့်ပါတယ်… အောင်လေးအောင်မှာအဖိုးကအငယ်ဆုံးပထမံနဝင်းဦးအောင်ပါ အဖိုးကဘာရောဂါမှမရှိပါဘူးနားနဲနဲလေးတာကိုဘာကြောင့်လေးလဲဆိုအဖိုးမှာလွယ်အိတ်တလုံးရှိတယ်ငွေလိုရင်အိတ်ထဲနှိုက်ရင်လိုသလောက်ရတယ် အဲ့ဒါလူတချို့သိပြီးအဖိုးခေါင်းကိုချည်းဘဲရိုက်ပြီးအိတ်ကိုလုသွားတယ် သူတို့မသိလို့ဒီအိတ်ကအဖိုးတယောက်ဘဲနိုက်လို့ရတာကျန်တဲ့သူနိုက်ရင်ပိုက်ဆံကမထွက်ဘူးတဲ့ 1972 နှစ်မှာဗိုလ်ချူပ်ကြီးနေဝင်းကအဖိုးကိုဖိုးဖိုးလို့ခေါ်တယ်လို့မိန့်ပါတယ် အတွင်းရေးမှူး(၂)ဦးတင်ဦးကိုဒီတခါခရီးထွက်ရင်ငါ့သားပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမိန့်ပါတယ် တကယ်လဲရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်အဖိုးကပျောက်သွားတာအခုချိန်ထိဘယ်သူမှအဖူးမခံတော့တာပါ… အဖိုးကိုသုံးကြိမ်မြောက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကမိန့်တယ်။ လူတွေကအဖိုးကိုဟိုပါတီဒီပါတီကလို့စွပ်စွဲကြလိမ့်မယ်အဖိုးကဘယ်ပါတီမှမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးကဘုရားပါတီပါ အဖိုးကဗေဒင်ယတြာမပေးပါဘူးတဲ့တကယ်လဲကျမတို့ကိုဘာလုပ်ညာလုပ်မပြောဘူးတရားများများထိုင် မထိုင်နိုင်ရင်ပုတီးများများစိတ်လို့ဘဲမိန့်ပါတယ် အဖိုးပြောတဲ့အတိုင်းပါဘဲလူလုံးဝအတွေ့မခံတဲ့အဖိုးကိုအခုခန္ဓာဝန်ချမှဟိုပါတီဒိပါတီ၊ဟိုလူကြီးဒီလူကြီးကိုယတြာလုပ်ပေးတာလို့စွပ်စွဲခံရတာပါဘဲ😢 ၄ ရက်နေ့ကအဖိုးဆေးရုံမှာဆေးလာစစ်တော့ကျမကလွဲပြီးဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူး ကျမကိုဖုန်းဆက်တော့ကျမအကျင့်ကလူတိုင်းကိုဖူးစေချင်တော့အဖိုးကိုမလျှောက်ဘဲသူငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားတော့ဆယ်မိနစ်နဲ့ပြန်ခိုင်းပါတယ် အဲ့ဒီမှာသူငယ်ချင်းခင်ပွန်းကိုသိန်းကျင်ကသူ့အဖေဆေးရုံတက်နေတာအခြေနေမေးတော့ပြီးပါပြီ လို့မိန့်ပြီးတရက်ခြားမှာကိုသိန်းကျင်အဖေဆုံးသွားပါတယ်… ၇ ရက်နေ့မနက်သဲဖြူဆရာတော်နဲ့အဖိုးစီသွားတော့အဖိုးကဘယ်သူမှပေးမလာပါဘူး … Read more
ယောင်္ကျားတယောက်အပေါ် မိန်းမတယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ၁။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ ကြင်နာစွာပြောသောစကားသံသည် မိန်းမတယောက်ကိုနွေးထွေးစေသည်။ ၂။ ယောက်ကျားတယောက်ရဲ့ ထွေးပွေ့မှုသည် မိန်းမတယောက်ကို လုံခြုံစေသည်။ ၃။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ နားလည်ပေးမှုသည် မိန်းမတယောက်ကို စိတ်ချမ်းသာစေသည်။ ၄။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုသည် မိန်းမတယောက်ကို ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဖြစ်စေသည်။ ၅။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးမယူခြင်းသည် မိန်းမတယောက်ကို လေးစားစေသည်။ ၆။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုသည် မိန်းမတယောက်ကို အားကိုးလိုစိတ်ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများသည် ချစ်သည်ဆိုသောစကားများပြောနေရုံနဲ့မပြီး ချစ်တတ်ဖို့လည်းအများကြီးကြိုးစားရပါဦးမည်။ ၁။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ ကြင်နာစွာပြောသောစကားသံသည် မိန်းမတယောက်ကိုနွေးထွေးစေသည်။ ၂။ ယောက်ကျားတယောက်ရဲ့ ထွေးပွေ့မှုသည် မိန်းမတယောက်ကို လုံခြုံစေသည်။ ၃။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ နားလည်ပေးမှုသည် မိန်းမတယောက်ကို စိတ်ချမ်းသာစေသည်။ ၄။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုသည် မိန်းမတယောက်ကို ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဖြစ်စေသည်။ ၅။ … Read more
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ချမ်းသာနိုင်တဲ့ ရာသီခွင်လေးမျိုး
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ချမ်းသာနိုင်တဲ့ ရာသီခွင်လေးမျိုး လူတိုင်းမှာ ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း ရှိပါတယ် သို့သော် လူတိုင်းချမ်းသာလာမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်ချို့လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ အကြံဉာဏ်တွေကြောင့် ချမ်းသာလာကြသလို၊ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ကံဇာတာကိုက အရမ်းကောင်းနေလို့ ချမ်းသာလာကြတာပါ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အသက် (၃၀) မတိုင်ခင်မှာပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ချမ်းသာနိုင်တဲ့ ရာသီခွင် (၄) ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1.Virgo ကန်ရာသီဖွား(August 23 – September 22) ဒီရာသီဖွားတွေဟာ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ပြီဆိုရင် အသေးစိတ်လွန်းပြီး အရမ်းလည်း စူးစိုက်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ အလုပ်လည်းအရမ်းကြိုးစားတဲ့အပြင် အောင်မြင်လိုစိတ်လည်းကြီးမားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတော့မယ်ဆိုရင် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး အကောင်းဆုံးကို တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ် တာကြောင့် သူဌေးဖြစ်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးရာသီဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်။ 2.Taurus … Read more
ဘယ်နားသွားသွားထင်းခနဲလှပစေဖို့နဲ့ ဘာလေးဝတ်ဝတ်လှနေစေဖို့ အသားဖြူချင်လိုက်တာလို့ဆိုပြီး တွေးနေတဲ့သူလေးတွေများရှိလား။ အသားဖြူချင်ပေမယ့် ထိခိုက်မှုနည်းစေဖို့အတွက် သဘာဝနည်းလေးတွေပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက လိုချင်နေတဲ့အဖြေကို ထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ကဲ..အသားဖြူဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား………… သဘာဝအတိုင်း အသားဖြူစေဖို့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဘာတွေများလဲ…………. မြင်သူတိုင်းအားကျရလောက်အောင် အသားလေးဖြူဝင်းစေဖို့ဆိုရင် သင်္ဘောသီး နဲ့ ပျားရည် သင်္ဘောသီးက အရသာရှိရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အသားအရေအတွက်ပါ တော်တေ်ာလေးအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သင်္ဘောမှာပါတဲ့ papain ဆိုတဲ့ဒြပ်ပေါင်း နဲ့ alpha hydroxy acids တို့ကအရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းလွှာအထိသန့်စင်စေပြီး အသားအရေကိုကြည်လင်ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ ပျားရည်ကတော့ အနာကျက်စေပြီး အမာရွတ်တွေကိုပါးစေနိုင်သလို ဘက်တီးရီးယားတွေကို အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မှာက သင်္ဘောသီးတစ်စိတ်စာ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာတို့ကို ရောစပ်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာအပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလူးပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပါ။ … Read more
ကမ္ဘာပေါ်က ပညာရှင်တွေ ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ အချစ် အမျိုးအစား( ၇ )မျိုး
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ပေါက်ဖွားကူးခတ်နေတဲ့ မျက်စိမမြင်သူတွေမြင်နိုင်တဲ့ နားမကြားသူတွေကြားနိုင်တဲ့ ဆွံအနေသူတွေ ပြောနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုပါ..။ ရှေးခေတ် ဂရိတွေရဲ့ဘာသာစကားမှာအချစ်ကို စကားလုံး သုံးမျိုးနဲ့ဖော်ကြူးထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံး သုံးလုံးကိုပဲ ပညာရှင်တွေက အချစ်သုံးမျိုးလို့ ခေါ်ဆိုသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်..။ အဲ့ဒီအချစ် ၃ မျိုးနဲ့ ဒီ၃မျိုးကထပ်ဆင့်ဖြစ်လာတဲ့ အချစ် ၄မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုအချစ်မျိူးတွေလဲဆိုတာအောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး..။ Eros Love (ကာမအချစ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတပ်မက်တဲ့အချစ်) Eros Loveလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတွေ့ရအများဆုံးအသုံးအများဆုံးသောအချစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီအချစ်အမျိုးအစားကို ကာမရာဂကို နှိုးဆွပေးတဲ့အချစ်လို့ ဆိုကြပါတယ်..။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ အရှိန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတတ်ပါတယ်..။ Eros Loveဆိုတာ ဂရိကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ အတွေ့ရများတဲ့ အချစ်အမျိုးအစားပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့မယ် ချစ်မယ် အိပ်မယ်ဆိုတာပေါ် အခြေခံထားတာလို့ဆိုလို့ရပါတယ်..။ ဒီအချစ်က … Read more